Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho iyo dad ku dhintay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho iyo dad ku dhintay
Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho iyo dad ku dhintay
Qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay Maqaayad ku taalla isgoyska Jubba ee u dhaxeeya degmooyinka Boondheere iyo Shangaani.
Ruuxa ayaa la sheegay inuu Qaraxa fuliyay xilli dad badan oo shacab ah ay goobta fadhiyeen.
Dad goobjoogayaal ah ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in Qaraxa uu ka dhacay Maqaayad ay fadhiistaan dad badan oo ah kuwo isticmaala qaadka.
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay Qaraxa, Ciidamada Ammaanka ayaa xiray Goobta, waxaana ay halkaasi ka bilaabeen baaritaano hor dhac ah.
Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada 5 qof halka 10 kalena ay dhaawacmeen.
Previous articleTababar ku saabsan la tacaalidda tahriibka oo la soo gabagabeeyay
Next articleDHAGEYSO:Madaxda Jubbaland iyo Puntland oo maanta tagay Goobwayn